नेपाल लाइभ सोमबार, जेठ १९, २०७७, १७:४५
काठमाडौँ- नवगठित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संविधान संशोधनको छुट्टै विधेयक संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा दर्ता गराएका छन्। सरकारले प्याकेजमा संविधान संशोधन गर्न अस्वीकार गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको छुट्टै विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
विधेयक दर्ता गर्न नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ र लक्ष्मणलाल कर्णलगायत संसद् सचिवालय पुगेका थिए। सरकारका तर्फबाट निसान छापमा भएको नेपालको नक्सा संशोधन गर्न आइतबार कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा छलफलका लागि प्रवेश गराएकी थिइन्। जसपाले भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा हुने प्रतिनिधित्व, प्रदेशको सीमांकनलगायतमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूले दर्ता गराएको विधेयकमा सरकारले समर्थन नगरे सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि आफूहरूले पनि समर्थन नगर्ने उनले बताए। 'हामीले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकमा सरकारले समर्थन नगरे हामी पनि गर्दैनौँ,' नेता कर्णले विधेयक दर्ता गराएपछि भने।त्यसपछि संसदीय दलको बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
कुन धारामा कस्तो संशोधन चाहन्छ जसपा?
सपाले संविधानको भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सिमांकनका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको कुरा पटकपटक भन्दै आएको छ। तर उसले पनि ठोस रुपमा प्रस्ताव ल्याएको थिएन।
यी माथिका विषयमा राजपाले संशोधन चाहेको हो। यिनै प्रस्ताव दर्ता गराउन राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट नेताहरू महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राययादव, शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजेन्द्र महतो, केशव झालगायतका नेता तामझामसहित शुक्रबार पनि संसद् सचिवालय पुगेका थिए। तर प्रक्रिया नपुगेकाले उनीहरूले सोमबार प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सोमबार कुन जिल्लामा कति भेटिए संक्रमित भेटिए?
एमसिसीका विषयमा सुनियोजित प्रचार गरियो : जसपा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का विषयमा सुनियोजित प्रचार गरिएको बताएको छ। सोमबार, असार २९, २०७७
सोमबार कुन जिल्लामा कति भेटिए संक्रमित भेटिए? सोमबार, असार २९, २०७७